EX - ABSDF: January 2013
by Seaman Nayminthu on Thursday, January 31, 2013 at 2:16am · မိုးကျရွှေကိုယ်များ
အုပ်ချုပ်သော ဘီရုမာပြည် တိုင်းဌာနီကြီးတွင် ဖြစ်ပျက်သမျှ အရာအားလုံးတို့ကား အစဉ်အမြဲ ထူးခြားဆန်းကြယ်လျက် မြင်တွေ့ရတိုင်း ကြားသိရတိုင်း ရင်သပ်ရှုမော အံ့သြဖွယ် မကုန်နိုင်အောင် ရှိနေတော့လေ၏။
ညွှန်းဆိုခေါ်ဝေါ်လိုက်ရသည်မှာ သူတို့သည် ဤဝသုန် ကမ္ဘာမြေထုကို ဘူမိနတ်သန် ပြုကာ မွေးဖွားကြီးပြင်း လာကြသူများမဟုတ်ကြဘဲ အခြားအခြားသော ဘယ်နေရာ ဌာနမှန်းမသိသည့် ပြင်ပ ဂြိုလ်ကမ္ဘာ (အနီးစပ်ဆုံးအားဖြင့် အင်္ဂါဂြိုလ်သား မားရှန်းများ ဖြစ်မည်ဟု ခန့်မှန်းရ၏) အသီးသီးတို့မှ ဟယ်လီဂျက်တပ် ကော်ပလာ ယာဉ်ပျံများ စီးနင်းလိုက်ပါ သွားလာကြရင်း လမ်းခရီးခုလတ် မောင်းဆီအပြတ် ခေတ္တခဏ ဆင်းသက် ရပ်နားခိုက် သာမောဖွယ် ဤဌာနေမှာ လေညှင်းခံရင်း အပန်းဖြေ ခရီးတထောက် နားမည် အကြံပြုလျက် ယာယီ စံအိမ်တော်များ ဆောက်လုပ်ကာ စံမြန်းလာသည်မှာ ရာစုနှစ်တဝက် ကျော်ကျော် (လူ့သက်တမ်းတခုနီးနီး) မျှလောက်တော့ ရှိပေပြီ။
Moe Heine shared Sa Maung's photo.
၂၀၁၂ တွင် စတင် ပေါ်ပေါက် လာသော မြန်မာနိုင်ငံ စာနယ်ဇင်းကောင်စီ (ယာယီ) သည် သမ္မတက တိုက်ရိုက် ပေးအပ် ထားသော တာဝန်တရပ်ကို ပီပီပြင်ပြင်လုပ်ကိုင်နေပြီဟု မြင်ရ၏။ ၎င်းတာဝန်ကား Media law (ခေါ်) Press law ခေါ် ဥပဒေကြမ်း ကို ရေးဆွဲခြင်းဖြစ်၏။
မြန်မာနိုင်ငံ စာနယ်ဇင်း ကောင်စီ (ယာယီ) ဖြစ်ပေါ်လာပုံသည် စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဖြစ်သည်။
Ye Yint Nge and2other friends shared Zaw Mintun Zawmintun's photo.
ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူသော လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု အရေး ယူဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီသို့ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန အကြီးအကဲများ၏ အဂတိတရား လိုက်စားမှုများ အား စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးပါရန် တိုင်ကြားစာ ပေးပို့ခဲ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ Eleven Group Trading ၏ ဒါရိုက် တာဒေါက်တာသိန်းမြင့်ကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်များအား ပြန်လည်ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
by Myanmar Journal on Wednesday, January 30, 2013 at 4:36pm ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးများ ဦးဆောင်ကာ မကြောက်တရား လိုက်လံ ဟောပြောမည်
(မဇ္ဈိမ)။ ။ စစ်မက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ကရင်ပြည်နယ် ဒေသများတွင် ပြည်ထောင်စု
အစိုးရအဖွဲ့မှ ဝန်ကြီးများ ဦးဆောင်ကာ မကြောက်တရားများ လိုက်လံ ဟောပြောသွားမည်ဟု မြန်မာ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး စင်တာ(MPC) တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်း များနှင့် တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်းကပြောကြားသည်။
တောင်ကြီးမြို့တရားရုံးမှ ထူးဆန်းသောအမှုကြီး ဇန်န၀ါရီ ၃၀ ၊ ၂၀၁၃
တောင်ကြီးမြို့တရားရုံးကို ကျွန်တော် (စာရေးသူ) ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ ရောက်သွားတုံး ကြားသိရတဲ့ အမှုအကြောင်းပါ။ ဒီအမှုအကြောင်းကို အများသိအောင်ရေးပြချင်တဲ့
ငြိမ်းချမ်းရေး လူငယ်အဖွဲ့ နှင့်အတူ လမ်းလျှောက်သူ ပြင်သစ် နိုင်ငံသားကို မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြန် ထွက်ခွာရန် ညွှန်ကြား
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းကို ကော်ပိုရေးရှင်း အဖြစ် ပြောင်းလဲမည် ဇန်န၀ါရီလ (၃၁)ရက်နေ့ ထုတ် shade journal အတွဲ(၇)၊အမှတ်(၁၀)
အီလက်ထရွန်းနစ် ဥပဒေမှ နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်များ ပယ်ဖျက်မည်............
စစ်အစိုးရက ဒီမိုကရေစီ အရေးလှုပ်ရှားသူများကို အရေးယူရာတွင် အဓိက အသုံးပြုခဲ့သည့် အီလက်ထရွန်းနစ် ဥပဒေမှ ပြစ်မှုနှင့် ပြစ်ဒဏ်များကို ပြင်ဆင် ပယ်ဖျက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆက်သွယ်ရေး၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာ ၀န်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးသောင်းတင်က ပြောသည်။
by Myanmar Journal on Tuesday, January 29, 2013 at 5:33pm ·
အမိန့် အမှတ် ၂/၈၈ ကို ပယ်ဖျက်
နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေး တက်ကြွ လှုပ်ရှား သူတွေကို အရေးယူ ရာမှာ အသုံး ပြုခဲ့တဲ့ အရင် စစ်အစိုးရ လက်ထက်က အမိန့် အမှတ် ၂ / ၈၈ ကို အခု အစိုးရက ပယ်ဖျက်လိုက် သလို၊ အီလက်ထရောနစ် ဥပဒေကိုလည်း ပြင်ဆင် ရေးဆွဲဖို့ သဘောတူ လိုက်ပါတယ်။
မြန်မာ ငလျင်ဒဏ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေး အမေရိကန်ပါဝင် လုပ်ဆောင်
ငါးယောက်ထက်ပို စုဝေးခွင့်၊ စီတန်းလှည့်လည်ခွင့် တားမြစ်အမိန့် ပျက်ပြယ်
ဦးဥာဏ်ဝင်း စွဲဆိုထားသည့်အမှုများကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်က ပယ်ချ
ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းအရာရှိ ၈ ဦးကို အလွဲသုံးစားလုပ်မှုနဲ့ တရားစွဲဆိုခံရ
အဲပုဂံ Black Box စစ်ဆေးမှု ပြီးစီး
သမ္မတဖြစ်လာမယ့် ပတ်ဂွန်ဟေးနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး (ရုပ်/သံ
ခေတ်နှင့်ညီသည့် ဥပဒေသစ် ပြဋ္ဌာန်းပြီးမှသာ ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေ ရုပ်သိမ်းသင့်ဟု ဒုဝန်ကြီး ပြောကြား
၄၇-၇၄ ခုနှစ်များ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ထူးခြားဖြစ်ရပ်ဆန်းများ
January 29, 2013 Home, ဆောင်းပါး စာရေးသူသည် ““၁၁ ဂဏန်း မြန်မာပြည်””ဆောင်းပါးကို Hot News ဂျာနယ်
26 April 2012 ခုနှစ်နေ့ က၊ ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ ထိုစဉ်က စာရေးသူ၏ ဆောင်းပါးတွင် စာရေးသူ အဓိကတင်ပြ ထားသော၊ အကြောင်းအရာများနှင့် ဆောင်းပါး၏ အဓိကအချက်များကို လျှောက်လွှာ (၂) မျက်နှာခန့် ထုတ်နုတ်ဖြတ်တောက်ထားသောအခါ စာရေးသူ တင်ပြလိုသော အဓိကအကြောင်းအရာများ ပျောက် ကွယ်သွားသဖြင့် ကိုယ့်ဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြီး အားမလို အားမရ စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်ခဲ့ရသည်မှာအမှန်ပါ။
Tuesday, 29 January 2013 ကျနော်တို့ရဲ့ နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သူ့ရဲ့ ဒဿမမြောက် ပြည်ပနိုင်ငံ ခရီးစဉ်အဖြစ် တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံကို တနလာင်္နေ့ကပဲ ဆိုက်ရောက်သွားပါပြီ။
by Bo K Nyein on Monday, January 28, 2013 at 6:22pm ·
အမှတ်မထင် စာဆောင် ဂျနယ်တစ်ဆောင်မှာ သားစိုးအကြောင်းဖတ်မိတယ်။
မထင်မှတ်ပဲ ပေါ်လာတဲ့ အတွေးအခေါ် တစ်ခုပါ။
အမေရိကားမှာ ၁၉၈၂ ကတည်းက ရောက်နေပေမဲ့ ဟစ်ဟော့ ရော ရက် (Rap) ဂီတကို စိတ်ဝင်တစား တခါမှ နားမထောင်ဖူးပါ။ အမှန်စင်စစ် မြန်မာခေတ်ပေါ် တေးသီချင်း ၊
ရုပ်ရှင် နဲ့ လည်း ရင်းနှီးမှု မရှိခဲ့ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံက ခေတ်ပေါ်တေးဂီတကို နားယဉ်ခဲ့ရပါတယ်။ အကြောင်းက စာရေးသူဟာ အနုပညာပါရမီ နဲခဲ့သူပါ။ ရုပ်ရှင်လည်း မကြိုက်ပါ။ Read more »
by Myanmar Journal on Monday, January 28, 2013 at 4:44pm ·
၃ ကြိမ်ဆက် ချန်ပီယံ ဂျော့ကိုဗစ်(ချ)
ကျင်းပ သွားခဲ့တဲ့ ဩစတေးလျ အိုးပင်း တင်းနစ် ပြိုင်ပွဲမှာ ဘယ်သူတွေ အောင်ပွဲ ခံခဲ့ကြသလဲ ဆိုတာအပြင် ဘောလုံး လောကက မမျှော်လင့်တဲ့ ရလဒ်တွေ ထွက်ခဲ့တဲ့ အဖ်အေဖလား ဘောလုံး ပွဲတွေ အကြောင်း တင်ဆက်ပေးသွားဖို့ ရှိပါတယ်။ အခုတော့
အရင်ဆုံး တင်းနစ်နဲ့ စရအောင်ပါ။
ဒီဓာတ်ပုံလေးထဲက ကလေးငယ်တဦး ကတော့ ၁၉၉၄ခုနှစ် အာဖရိကတိုက် ရဝမ်ဒါနိုင်ငံက လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်ပွဲကြီးအပြီး အသက်မသေပဲ လွတ်မြောက်ရှင်သန်ရစ်သူများအနက်မှ တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့အာဖရိက ဒေသတခုဖြစ်တဲ့ ရဝမ်ဒါ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှူလို့ဆိုရင် လူတိုင်းကြားဖူးကြမှာဖြစ်ပေမယ့်အသေးစိတ်ကိုတော့ သိသူနည်းပါးလာလိမ့်မယ်။ ဆက်လက်ပြီးတော့ ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အတီး လေ့လာထားသမျှလေးတွေကို တင်ပြပါရစေ။
က၇င်ပြည်နယ်အတွင်း သဘာဝ ထုံးကျောက်ဂူများ ပျက်စီး ပျောက်ကွယ်မည်ကို ဒေသခံများ စိုး၇ိမ် အစိုးရနဲ့ ကေအိုင်အို ငြိမ်းချမ်းရေး ပန်ဆန်းမှာ ဆွေးနွေးဖို့ UWSA ကမ်းလှမ်း
သားငါးတွေမှာ ဆိုးဆေးအသုံးပြုမှု အန္တရာယ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းချက်
မခါခက် ရှေးတန်းစခန်းနဲ့ ပါကထောင် ဒုက္ခသည်စခန်းက အခြေအနေ (ရုပ်/သံ)
ကေအိုင်အေ ဌာနချုပ် လိုင်ဇာအနီးမှာ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေ (ရုပ်/သံ)
မန္တလေးမှာ ဆီဘောက်ဆာမီးလောင် သားဖွား မီးယပ် ဆရာဝန် တစ်ဦး လိုင်စင် ပိတ်သိမ်းခံရ
ကြိုင်သန်းရွှေ နှင့် မက်စ်မြန်မာ အဆောက်အအုံများ မီးရှို့ ခံရ
ဘားအံ စက်မှုဇုန် မြေကွက်ကို လူကြီး သားသမီးအား ပြောင်းလဲ ချပေး၍ ဒေသခံ လုပ်ငန်းရှင်များ မကျေနပ်
by Myo Set on Sunday, January 27, 2013 at 4:01pm ·
ယခု စီးပွားရေးမဟာအင်အားကြီးဖြစ်လာနေသည်။ သူ၏ စစ်ရေးတိုးချဲ့မှုကလဲ အမေရိကန်ကို စိုးရိမ်မှုတိုးပွားလာစေသည်။ ထို့ပြင် တရုတ်၏ နိုင်ငံရေးကိစ္စများသည် အမေရိကန်အကျိုးစီးပွားနှင့်လဲ များစွာ ဆက်စပ်နေပါသည်။ ထို့ပြင် လက်ရှိ ကမ္ဘာပေါ်တွင် တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းနေသော နိုင်ငံရေးစံနစ် များနှင့် တိုင်းတာကြည့်လျှင် တရုတ်မှာ ဘောင်လွတ်နေသည့် နိုင်ငံရေးစံနစ်သဘောမျိုးဖြစ်နေသည် ကိုတွေ့ရသည်။ စစ်ပြီးခေတ် ဂျပန်နှင့်လဲ မတူ၊ အိန္ဒိယနှင့်လဲ မတူပေ။ တမူသီးခြားပုံစံဖြစ်သည်။ ထို တိုင်းပြည်ကြီးသည် ကမ္ဘာကြီးကို စိတ်ဝင်စားစေမည်ဖြစ်သလို ကမ္ဘာ့အရေးအခင်းများကိုလဲ လွှမ်းမိုးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
by Myanmar Journal on Sunday, January 27, 2013 at 3:51pm ·
Microsoft နဲ့ Googleတို့ မြန်မာပြည် လာမယ်
မြန်မာ့ဈေးကွက်ကို ဝင်တော့မယ့် Microsoft နဲ့ Google
မြန်မာ့ ဈေးကွက်ကို ဝင်ရောက် နိုင်ဖို့ Microsoft နဲ့ Google ကုမ္ပဏီ တွေက စိတ်ဝင်စား နေကြပါတယ်။
စီးပွားဖက် ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်ဖို့လည်း ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။
မီးခိုးတွေ မပျောက်သေးပေမဲ့...အလင်းရောင်တော့ မြင်ရပြီ.....
ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်...လိုင်ဇာမြို့ထဲက ကလေးလေးဘာမှန်းမသိတဲ့ တောင်တန်းတွေကိုသူ.... ထွက်ပြီး ငေးရဲပြီလို့....
မောင်တောဒေသမှာ လုံခြုံရေးတပ်တွေ တိုးမြှင့်ချထား
လဂျားယန် စခန်းအနီးရှိ မြန်မာအစိုးရ စစ်ကြောင်းအား KIA အဖွဲ့  မှ လာရောက် တိုက်ခိုက်သည့် မှတ်တမ်း ဗီဒီယို (ရုပ်-သံ)
တပ်မတော်ကို နှစ်သက်ဆဲ ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်စုပြော
အဆိပ်ခတ်မှု သတင်း မမှန်ဟု ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရဆို
ယနေ့ကျင်းပသော ရိုးမရန်ကုန် မာရသွန်ပြိုင်ပွဲတွင် ကင်ညာနှင့်မြန်မာ ဆုအများဆုံး ရရှိ
Microsoft နဲ့ Googleတို့ မြန်မာပြည် လာမယ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဘားမားလို့ပဲ ခေါ်မယ်
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် သတ္တိရှိဖို့ လိုတယ်
အီဂျစ်မှာ ဘောလုံးပွဲ အဓိကရုဏ်းနဲ့ လူ ၂၁ ဦးကို သေဒဏ်ချမှတ်
ကေအိုင်အေ ဗျူဟာမြောက်စခန်း သိမ်းပိုက်ရေး စစ်တပ်ထိုးစစ် ပြင်းထန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာဝိုင်ယီ ကျောင်းသားတွေနဲ့ တွေ့ဆုံ ပထမဆုံး PNLO ဆက်ဆံရေးရုံး တောင်ကြီးမြို့မှာ ဖွင့်လှစ်
(၁) ရှင်မ…. ရယ်…. အစ လာလာ မဖော်နဲ့ဟာ အကျမတော်တာတွေ များနေလိုပါ… ဘဝ အပေါ်လည်း နာခဲ့ပြီးပြီ…လေ…။
ကျမရဲ့ဖြတ်သန်းမှု့၊ ကျမရဲ့ ကိုယ်၊ စိတ်၊ နှလုံး၊ သုံးပါးနဲ့သာ ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့် အကြောင်းအရင်း အစစ်အမှန်ကိုသာ ရှာလို၍ ဖြစ်ပါကြောင်း ။
ကျမမေးချင်တာက” ဒီလောက်လူတွေအများကြီး ဘယ်လိုအကြောင်းတွေကြောင့် ထောက်လှန်းရေးတွေ ဖြစ်ကုန်ခဲ့ကြရတာလဲ ။” အားလုံးပဲ ဝိုင်းဝန်းစဉ်းစား ကြည့်ကြရအောင်ပါ။
by Myanmar Journal on Saturday, January 26, 2013 at 5:45pm ·
သမ္မတအဖြစ် အရွေးခံရတဲ့ မီးလို့စ် ဇေမန်း
နိုင်ငံမှာ ပထမဆုံး အကြိမ် အဖြစ် တိုက်ရိုက် ရွေးကောက် တင်မြှောက်တဲ့ သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲ မှာတော့ အရင် ဆိုရှယ်လစ် ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း မီးလို့စ်ဇေမန်းက အနိုင်ရရှိ သွားပါတယ်။
သူဟာ မဲစုစုပေါင်းရဲ့ ၅၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ရရှိ ခဲ့ပြီး မဲ ၄၄ ရာခိုင်နှုန်းသာ ရတဲ့ ပြိုင်ဘက် အထက်တန်းလွှာ က နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ခါရဲလ် ရှဝါ့ဇန်ဘတ်ခ် ကို အနိုင်ရရှိ
Htet Aung KyawABSDF - Southern Burma
ထက်အောင်ကျော်။ (၀၁-၁၁-၂၀၁၂) ဒီနေ့ နိုဝင်ဘာလ ၁-ရက်နေ့ဟာ ABSDF (All Burma Students' Democratic Front)
ခေါ် မြန်မာ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးရဲ့ ၂၄-နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်း အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် ၈-လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးကို စစ်တပ်အစိုးရက ပစ်ခတ်ဖြိုခွဲပြီးတဲ့နောက် အဲဒီစစ်တပ်ကို လက်နက်ကိုင်တော်လှန်မှ ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ Read more »
ABSDF မြောက်ပိုင်း၌ ၁၉၉၁ ခုနှစ်နှင့် ၁၉၉၂ ခုနှစ်များ၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဖမ်းဆီးအရေးယူမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ABSDF ဥက္ကဌဟောင်း ဒေါက်တာနိုင်အောင်၏ ရှင်းလင်းချက် လတ်တလောကာလအတွင်း ၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ ၁၉၉၂ ခုနှစ်များ၌ မကဒတ မြောက်ပိုင်း၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဖမ်းဆီး အရေးယူမှုများနှင့် ပါတ်သက်၍ ပြောဆိုရေးသားမှုများကို
by Nyo Htet on Friday, January 25, 2013 at 9:37am ·
ဘတ်ဂျက်ချထားပေးခြင်းမရှိတော့သဖြင့် မြဧရာ ဈေးသင်္ဘောအား ပုဂ္ဂလိကသို့ လွှဲပြောင်းတော့မည်
ဧရာဝတီ မြစ်ကမ်းပါး ပြိုကြမှုကြောင့် အိမ်ခြေ ၁၆၀ ကျော် ရွှေ့ပြောင်းနေရ (ရုပ်/သံ)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် East-West Center မိန့် ခွန်း(ရုပ်/သံ)
ခါယာဘွမ်ကုန်းကို မြန်မာတပ်မတော်က သိမ်းပိုက်
နိုင်ငံခြားမှ တင်သွင်းသောကားများကို အခွန်ပုံစံအသစ်ဖြင့် အနာဂတ်တွင်ကောက်ခံမည်
လှိုင်မြို့နယ် သံလမ်းမှတ်တိုင်တွင် ၁၂၄ မြောက်ပိုင်းခရိုင်အထူးယာဉ်လိုင်းမှ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုတိုက်မိခဲ့
သံသုမာအားကစားကွင်းရှေ့ ဓာတ်ဆီဆိုင်ဆောက်လုပ်မှု ညှိနှိုင်း
အုပ်ချူပ်ရေးမှူးက လူငယ်တစ်ဦးကို ရိုက်နှက်ထိုးကြိတ်ပြီး တရားစွဲဆို
မိတ္ထီလာ အမြှောက်တပ်မှ လက်အောက်ငယ်သားများအပေါ် အနိုင်ထက်ပြုကျင့်နေခြင်း
by Myanmar Journal on Saturday, January 26, 2013 at 6:15am ·
အရေးပေါ်နဲ့ မီးဖွားလူနာ အခမဲ့ကုပေးမယ်
မိခင်သေနှုန်းကျဖို့ ဆေးရုံတက် များများမွေးဖို့ အခမဲ့နည်းပါးဖြစ်အောင် လုပ်မယ်လို့ ညွှန်ချုပ်ဆို
မွေးလူနာတွေ များနိုင်သလောက် များများ မွေးစေချင်တယ်၊ ဒါမှသာ မိခင်သေနှုန်း ကျသွားမယ်လို့ ကျန်မာရေးဝန်ကြီးဌာန အဆင့်မြင့် အရာရှိကြီးတဦးက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
မီးဖွားလူနာတွေကိုသာမကဘဲ အရေးပေါ် လူနာတွေကိုလည်း လူနာရှင်တွေ ဆေး၊ ပတ်တီးတွေ တတ်နိုင်သမျှ မဝယ်ရအောင် ကူညီ စောင့်ရှောက်မှုတွေ ပေးဖို့ အစိုးရ အနေနဲ့ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေ တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပြန်လာကြလေပြီ။ သူတို့ဆိုတာ 'ကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့'လို့ ပြောနိုင်တဲ့ ABSDF အဖွဲ့ကြီးရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းများဖြစ်ကြတဲ့ ဒေါက်တာနိုင်အောင်၊ ကိုမိုးသီးဇွန်နဲ့ ကိုထွန်းအောင်ကျော်တို့ အပါအ၀င်ဖြစ်တဲ့ လူတစ်စုပါပဲ။
*** အမေ့လျော့ခံဧရိယာထဲမှ နိုင်ငံ့ရတနာလေးများသို့မဟုတ် အနာဂတ်စိန်ခေါ်သံ ***
မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပညာသင်ကြားခွင့်မရှိသောကလေးပေါင်းများစွာရှိနေသည့်အနက် အချို့မှာ ကျောင်း မတက်နိုင်ဘဲ မိမိတို့ဝမ်းရေးအတွက်ကိုယ်တိုင်ရုန်းကန်နေရမှုများရှိနေပြီး ကလေးသူငယ်များရဲ့ အသက်မွေးမှုများမှာလည်း ရေရာသေချာမှုမရှိသောအနေအထားများစသွာနှင့်ပြည့်နှက်နေခဲ့သည်။ အိမ်ခြေရာခြေမဲ့များ ၊သာမာန်လက်လုပ်လက်စားလူတန်းစားများ၏ ရင်သွေးငယ်ကလေးများ၏ အနာဂတ်များသည်လည်းကူညီမည့် သူမရှိဘဲ လွင့်မျောလို့သာနေပါတော့တယ်။ Read more »
သမ္မတနဲ့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် တကယ်ပဲ သဘောထား ကွဲလွဲနေသလား
လိုင်ဇာသွားမည့် ငြိမ်းချမ်းရေးယာဉ် တားမြစ်ခံရ
ကလေးစစ်သား ၈ ဦး ကေအိုင်အေ ပြန်လွှတ်ပေးဟု အိုင်အယ်လ်အိုပြောကြား
နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ၂၀၁၃ တွင် ဒေါ်လာ ငါးဘီလီယံ အထိရှိမည်ဟု ၀န်ကြီးဦးစိုးသိန်း မျှော်မှန်း
ပညာရေးကဏ္ဍအတွက် ဘတ်ဂျက်များ လိုအပ်သောနေရာသို့ ရောက်ရှိရန်လိုအပ်
ထိုးစစ်တွေ ထပ်လုပ်နိုင် တယ်ဆိုပြီး ကေအိုင်အေ ဘက်က ပြင်ဆင်နေ (ရုပ်/သံ)
တိုင်ကြားသည်ကို အေ၇းမယူပါက အရေးမယူသည့် ဌာနကိုပါ အရေးယူမည်
စက်ရုံမရောက်မီ KTV ရောက်သွားနိုင်သည့် နယ်ခံအမျိုးသမီးများ
ကျောင်းသား ရိုက်တဲ့ ဆရာမ ထောင်တစ်လကျ
ဟိရိသြတ္တပ္ပရှိဖို့ လက်ဦးဆရာ မိနဲ့ဖ
အမျိုးသားလုံခြုံရေးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ (အပိုင်း - ၁)
ပို့စ်မော်ဒန် နိုင်ငံရေး/ ရေဒီကယ်ဒီမိုကရေစီနှင့် မြန်မာဒီမိုကရေစီ
January 24, 2013 ရက် ၊ 10:30 တွင် ကိုကိုနန်းညွန့်ဦး ရေးသားခဲ့သော ဘလော့ဖြစ်ပါသည် ။ We can return to the beasts. But if we wish to remain human, then there is only one way, the way into the open society. Popper ကျွန်တော်တို့ဟာ သားရဲတိရစ္ဆာန်ဘ၀ ပြန်ရောက်သွားနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ လူအဖြစ်နဲ့ ဆက်တည်ရှိနေချင်သေးတယ်ဆိုရင် လမ်းက တစ်လမ်းတည်းပဲရှိတယ်။ အဲဒီလမ်းက ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း the open society ကိုသွားတဲ့ လမ်းပဲ။ ပေါ့ပ်ပါး
by Myanmar Journal on Thursday, January 24, 2013 at 2:26pm ·
ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဟောင်းနဲ့ အရာရှိကြီးတချို့ စစ်ဆေးခံနေရ
မကြာသေးခင်ကမှ ရာထူးက အနားယူသွားတယ် လို့ ကြေညာခဲ့တဲ့ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးသိန်းထွန်းအပါအ၀င် မြန်မာ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက အရာရှိကြီးတစ်ချို့ကို စုံစမ်းမှုတွေစတင်နေပြီလို့ နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ သမ္မတရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ပြန်ကြားရေး ဒုဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်က ဘီဘီစီ အတည်ပြုပြောပါတယ်။
Myint Aung and2other friends shared Boon Myo Myo's photo.
ဒီနေ့ပဲ့ ၂၄ - ၁- ၂၀၀၀ တုန်းက God Army ရတ်ခ်ျဘူရီ ဆေးရုံကိုဝင်စီးသောနေ့...အခုဆို (၁၃) နှစ် တိတိပြည့်ပြီ...ဂျော်နီ(ခ)ဗေဒါ ဦးဆောင်သည့် မြန်မာကျောင်းသားတပ် (ABSDF) ဟောင်း
၅ ဦး.. ဘန်ကောက်မြန်မာသံရုံးကို ဝင်စီးပြီး စစ်အစိုးရအပေါ်ဖိအားပေးခဲ့တယ်..
မြန်မာအတိုက်အခံများ အစိုးရလုပ်ဖို့ အသင့်ဖြစ်ကြပြီလား (မောင်ဝံသ)
by Maung Wuntha on Tuesday, January 22, 2013 at 2:52am ·
သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်နဲ့ အင်တာဗျူးလုပ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ ဘေဂျင်းအခြေစိုက် အရှေတောင်အာရှ သတင်းထောက် Hannah Beech ကို Times မဂဇင်းက ပြန်လည် အင်တာဗျူး လုပ်ထားတဲ့ ဆောင်းပါး ဇန်န၀ါရီလထဲမှာ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ အင်မတန် စိတ်ဝင်စားကောင်းတဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေ အများကြီး ပါဝင်တဲ့ အင်တာဗျူးမို့လို့ နိုင်ငံရေး စိတ်ဝင်စားသူတွေ မလွတ်တမ်း ရှာဖွေ ဖတ်ရှုသင့်ပါတယ်။ ဂျာနယ် တချို့မှာလဲ မြန်မာပြန်ဖော်ပြခဲ့ကြပြီးပါပြီ။ Read more »
အစိုးရတပ်က ပစ္စည်းလု၊ သတ်ဖြတ်မှုများရှိနေ
ကချင်စစ် အမေရိကန် အပြင်းအထန် ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်
တရားရေး မဏ္ဍိုင် ဖြောင့်မတ်ရေး တရား သူကြီးများ ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုရန် တိုက်တွန်း
ကလေး စစ်သား အရေး (ရုပ်/သံ)
ကချင်ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် ၀မ်းလျှောရောဂါဖြစ်ပွား၊ ကလေး ၇ ဦး သေဆုံး
မြန်မာတွင် ကလေး စစ်သား အသုံးပြုမှု ရှိနေဆဲ
ကူရာမဲ့တို့အတွက် မျှော်လင့်ချက် ရောင်နီဦး
ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ၀င်တိုက်မိသော်လည်း ရဲနှစ်ဦးထွက်ပြေး
ရွှေစည်းခုံ အဖေထက်သားတစ်လဦးနတ်ရုပ်မှ ရွှေပွတ်ယူခံရ
ဒိုင်နာနှင့်ဟိုင်းလပ်ယာဉ် ဖြည်းဖြည်းချင်း ဖယ်ရှားမည်
စီမံကိန်းထိခိုက်မယ်ဆိုရင် ဝမ်ဘောင်က မြန်မာအစိုးရကို တရားစွဲမည်ဟုဆို (ရုပ်/သံ)
“လက်တွေ့ ဒုက္ခခံစားနေရတယ်ဆိုတာ ပြည်သူတွေအသိဆုံးဘဲ” (ကျော်ကိုကို)
Nay Zaw and4other friends shared Aungmyo Tun's photo.
တွေ့ တာက ဗကသ တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဗျ။ အရပ်ဖက်လူ့ အဖွဲ့ အစည်း စုစုပေါင်း ၈၉ ခုပေါ့။ အဖွဲ့ ဝင်တွေရော၊ ဖိတ်ကြားထားတဲ့မီဒီယာတွေရော လူပေါင်း နှစ်ရာကျော်နဲ့ တွေ့ တယ်။ သမ္မတ က အဖွင့်မိန့် ခွန်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး ပြောတယ်။ အဲဒီထဲမှာ သူက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လက်တွဲဖို့ပြီးတော့ အဖွဲ့ အစည်းတွေအနေနဲ့အသိအမှတ်ပြုခံရအောင် မှတ်ပုံတင်ဖို့ လိုတယ်